အရင်လိုလူတွေလမ်းတွေမှာစည်ကားနေတာတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့် ဖြစ်သွားတဲ့သူမရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကို ရင်ဖွင်ပြောပြလာတဲ့ မေတိုးခိုင် – Cele Top Stars
သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစကတည်းမှ စပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် လမ်းပေါ်မထွက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် Speak Out လုပ်ပေးနေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ ဒါ့အပြင်လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်း စိတ်မေ ကာင်းဖြစ်နေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပိုက်ဆံသွားထုတ်ရင်းနဲ့ တွေ့ကြုံလာခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှပေးထားတာပါ။
ဒါကတော့ လမ်းတွေမှာ အရင်လိုစည်ကားနေတာတွေကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရ တာကြောင့် သွေးမအေးသွားကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအတူတူ တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်းလေးမှ အားလျော့သွားလို့ မဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း…. ” ပိုက်ဆံသွားထုတ်တာ လမ်းမှာ ကားတ္စေစည်ကားလိုက်တာ… စားသောက်ဆိုင်တွေ လူတွေအပြည့်ဪ သူတို့စိတ်မွန်းကျပ်လို့ ဒီနေ့တစ်ရက်လေး ထွက်ရင်းတိုးတာနေမှာဆိုပြီး ပြန်ဖြေ တစ်ချို့ဆို ရယ်မော ဪ ငါသူတို့ ရယ်မိတဲ့ တစ်ခဏလေးမှာ တွေ့မိတာနေမှာပါစိတ်ပြန်ဖြေ.. တကယ်လည်းအဲ့လိုလူတွေရှိမှာပါ တကယ်အဲ့လိုဆိုကောင်းမှာပဲ.. ဒါပေမဲ့ တစ်ခါလည်းမဟုတ် 😞တစ်ခါထွက် အခေါက်တိုင်းလူတွေပိုများတယ်… နေသား ကျသွားကျပြီလား?
မနာကျည်းကြတော့ဘူးလား…. ကျဆုံးသွားသူ တွေ အဖမ်းခံရသူတွေ မိသားစုတွေက ဒီလို အုပ်စုလိုက် ပျော်ပါးေ နကြတာ မြင်ရင်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလည်း? 😞 စဉ်းစားကြပါအုန်း… တကယ်ခံစားရလွန်းလို့ပါ😭 သွေးမအေးကြပါနဲ့နော် တောင်းပန်ပါတယ်။ မပြီးဆုံးသေးဘူးဒါကြီးက မပေါ့ကြပါနဲ့ အပြင်မှာ အသက်တွေရင်းပြီး တိုက်ပေးနေကြတဲ့သူတွေကိုအားနာပါအုန်း။ အသက်ပေးသွားကြတဲ့သူတွေကို အားနာပါအုန်း။ နှိပ်စက်ခံ ဖမ်းစီး ခံထားရတဲ့သူတွေကို အားနာပါအုန်း… ဒါအားလုံးတူတူတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲ နည်းနည်းလေးတောင် အားလျော့လို့မရဘူး။ အားတင်းထားကြပါအုန်း 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 PS : ဖူးကအမြဲအားလျှော့စေမယ်စကားတွေ စာတွေ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါလေးတော့တစ်ချို့ကိုမြင်စေ ချင်လို့ပါ။ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်းသိရှိနိုင်စေရန် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သရုပျဆောငျ မတေိုးခိုငျကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ အစကတညျးမှ စပွီး မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပူးပေါငျးပါဝငျနသေူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ လမျးပျေါမထှကျဖွဈပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျမြားမှတဈဆငျ့ Speak Out လုပျပေးနတောကိုလညျး မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပွငျလူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျရငျး မမြှျောလငျ့ဘဲ ကဆြုံးသှားခဲ့ကွတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေတှကျလညျး စိတျမေ ကာငျးဖွဈနတောပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ပိုကျဆံသှားထုတျရငျးနဲ့ တှကွေုံ့လာခဲ့တာတှကေို ပွနျလညျရေးသားဝမြှေပေးထားတာပါ။
ဒါကတော့ လမျးတှမှော အရငျလိုစညျကားနတောတှကေို ကိုယျတိုငျမွငျတှလေို့ကျရ တာကွောငျ့ သှေးမအေးသှားကွဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးအတူတူ တိုကျရမယျ့တိုကျပှဲဖွဈတာကွောငျ့ နညျးနညျးလေးမှ အားလြော့သှားလို့ မဖွဈကွောငျးကိုလညျး…. ” ပိုကျဆံသှားထုတျတာ လမျးမှာ ကားတ်စစေညျကားလိုကျတာ… စားသောကျဆိုငျတှေ လူတှအေပွညျ့ဪ သူတို့စိတျမှနျးကပျြလို့ ဒီနတေ့ဈရကျလေး ထှကျရငျးတိုးတာနမှောဆိုပွီး ပွနျဖွေ တဈခြို့ဆို ရယျမော ဪ ငါသူတို့ ရယျမိတဲ့ တဈခဏလေးမှာ တှမေိ့တာနမှောပါစိတျပွနျဖွေ.. တကယျလညျးအဲ့လိုလူတှရှေိမှာပါ တကယျအဲ့လိုဆိုကောငျးမှာပဲ.. ဒါပမေဲ့ တဈခါလညျးမဟုတျ 😞တဈခါထှကျ အခေါကျတိုငျးလူတှပေိုမြားတယျ… နသေား ကသြှားကပြွီလား?
မနာကညျြးကွတော့ဘူးလား…. ကဆြုံးသှားသူ တှေ အဖမျးခံရသူတှေ မိသားစုတှကေ ဒီလို အုပျစုလိုကျ ပြျောပါးေ နကွတာ မွငျရငျစိတျထဲမှာ ဘယျလိုခံစားရမလညျး? 😞 စဉျးစားကွပါအုနျး… တကယျခံစားရလှနျးလို့ပါ😭 သှေးမအေးကွပါနဲ့နျော တောငျးပနျပါတယျ။ မပွီးဆုံးသေးဘူးဒါကွီးက မပေါ့ကွပါနဲ့ အပွငျမှာ အသကျတှရေငျးပွီး တိုကျပေးနကွေတဲ့သူတှကေိုအားနာပါအုနျး။ အသကျပေးသှားကွတဲ့သူတှကေို အားနာပါအုနျး။ နှိပျစကျခံ ဖမျးစီး ခံထားရတဲ့သူတှကေို အားနာပါအုနျး… ဒါအားလုံးတူတူတိုကျရမယျ့တိုကျပှဲ နညျးနညျးလေးတောငျ အားလြော့လို့မရဘူး။ အားတငျးထားကွပါအုနျး 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 PS : ဖူးကအမွဲအားလြှော့စမေယျစကားတှေ စာတှေ တတျနိုငျသလောကျရှောငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဒါလေးတော့တဈခြို့ကိုမွငျစေ ခငျြလို့ပါ။ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲဖွဈပွီး ပရိသတျတှလေညျးသိရှိနိုငျစရေနျ တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။